Collectif Tany : “Mety handroaka ny olona eo amin’ny taniny ny fanovana ny lalàna” | NewsMada
Collectif Tany : “Mety handroaka ny olona eo amin’ny taniny ny fanovana ny lalàna”
Mahatsikaritra ny fikambanana Collectif Tany fa misy fahasamihafana ny andininy mikasika ny volavolan-dalàna farany hanovana ny lalàna mifehy ny tanin’olon-tsotra misy titra. Misy valo ny lohahevitra nasongadiny.
Mampitandrina sy mangataka fanovana ny volavolan-dalàna kasaina haroso ny fikambanana Collectif Tany. Momba ny harena an-kibon’ny tany ao amin’ny andininy fahenina, voalaza fa “mikasika ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, alohan’ny fitrandrahana, tsy maintsy manao fifanarahana amin’ny tompon’ny tany ny tompon’ny fahazoan-dalana hitrandraka”. Tsindrin’ny Collectif Tany fa “tsy maintsy atao alohan’ny fanomezana fahazoan-dalana hitrandraka ny fakana ny hevitry ny daholobe sy ny fakana ny faneken’ny tompon’ny tany”.
Faharoa, tsy nahazo titra, hatramin’izao, ireo nangataka hanoratra sombin-tany tamin’ny alalan’ny kadasitra iombonana. Manome alalana ny fanjakana haka ny tanin’izy ireo ity volavolan-dalàna ity satria iray volana monja ny fe-potoana omena ny mponina hanao hetsika fanoherana. Mangataka hanitarana ny fe-potoana ho herintaona ny Collectif Tany.
Halain’ny fanjakana ny tany tsy voasoratra
Mila ahitsy koa ny andininy faha-96 amin’ny lalàna teo aloha, milaza fa halain’ny fanjakana ny tany tsy nohajarina nandritra ny 20 taona. Saika tsy voasoratra aminy avokoa anefa ny ankamaroan’ny tany ambolen’ny tantsaha, ka azo antoka fa ho maro ireo hoesorina satria tsy manana ny hoenti-manana hikarakarana ny tany hisoratra aminy.
Mahita koa ny Collectif Tany fa kely loatra ny onitra omen’ny fanjakana mikasika ny fanalana ny tompon-tany noho ny hampiasan’ny fanjakana azy ho an’ny daholobe. Raha ny lalàna iraisam-pirenena nankatoavin’i Madagasikara (ny taona 1971) anefa, tsy maintsy mifanahantsahana amin’ny fahafahan’ny tompon-tany manana trano fonenana mendrika ny onitra omena azy. Tokony hesorina ao anatin’ity volavolan-dalàna vaovao ity koa ny andininy faha-126 mikasika ny fampiasam-bola 2007-036, manome fahafahana ny vahiny hividy tany.
Be loatra ny fahefan’ny sampandraharaha fananan-tany
Mikasa hanome fahefana feno ny mpiasa sy ny tompon’andraikitry ny fananan-tany ny andininy faha-47 sy faha-48 mandritra ny fiasany ao amin’ny Fitsarana tany mitety vohitra (TTA). Voalaza ao amin’ny andininy faha-55 fa tsy manan-jo hanohitra ny hevitr’izy ireo ny fokonolona, mandritra ny fivoriana fitsarana tany raha misy ny fifandirana tsy fitovian-kevitra. Azon’ny filohan’ny TTA atao ny miantso mpitandro filaminana raha sendra misy olona manohitra na mampiakam-peo, ary azo gadraina roa ka hatramin’ny dimy taona.
Ho an’ny Collectif Tany, tokony hofoanana io andininy io satria tsy mifanaraka amin’ny andraikitra ataon’ny fanjakana malagasy, hiantoka ny fitantanana mahomby ny fitsarana, ka mametraka ny ambaratongam-pitsarana samihafa.
Tsy ekena ny fitsarana manokana
Ho an’ny antontan-taratasy tsy ampy sy ny boky rovitra, mikasa hanangana fitsarana manokana momba ny tany ity volavolan-dalàna ity. Milaza ny Collectif tany fa efa nampangain’ny Komity momba ny zon’olombelona ao amin’ny firenena Mikambana fa tsy mifanaraka amin’ny fitsipiky ny fitsarana tsotra ny fananganana izany.
Manamafy koa ny Collectif Tany fa mitovy zo amin’ny olom-pirenena rehetra ny mpiasan’ny fananan-tany ka tsy tokony harovana manokana, ka tokony hofoanana ny andininy faha-117 hatramin’ny 120.